Vaovao - Fiaraha-miasa sambatra ao amin'ny IE expo China 2021
Tamin'ny 22 aprily, IE expo China 2021 dia nahavita tany Shanghai, Sina. Nametraka fifandraisana ara-barotra tsara amin'ireo mpanjifa manerana an'izao tontolo izao izahay.
Nampiseho vokatra vitsivitsy izahay tao amin'ny Fair, toa milina fanapahana laser fibre vy, milina fanapahana fantsom-laser, milina fanapahana laser lovia sy fantsonasy ny sisa. Noho ny vidiny avo lenta sy mifaninana dia raisin'ireo mpividy maro ny vokatray. Ary ireo mpanjifa efa niorina dia nanome fanombanana avo ho an'ny orinasanay.
Guohong Laser Technology (Jiangsu) Co., Ltd. aNy orinasa sa dia misahana manokana amin'ny fikarohana sy ny fampandrosoana, ny famokarana ary ny fivarotana ny masinina manapaka laser. Izahay dia manana injeniera sy mpiasa teknika ary tompon'andraikitra ambony amin'ny fitantanana izay manana traikefa efa an-taonany eo amin'ny sehatry ny milina fanapahana laser.
“Fahamarinana, kalitao, andraikitra no tena tanjonay, hanome anao vokatra tsara kalitao sy vidiny mifaninana izahay. Tongasoa eto an-toerana ireo namana avy any an-trano sy any an-tsena hiresadresaka momba anay!